कर्णालीमा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि – हाम्रो देश
कर्णालीमा थप ५४ जनामा कोरोना पुष्टि
२५ जेठ, सुर्खेत । कर्णालीमा आइतबार थप ५४ जनामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेश अस्पताल, पशुपन्छी रोग अन्वेषण केन्द्र, सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट थप ५४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
नयाँ पुष्टि हुनेमा सल्यानका २८, सुर्खेतका २० जना, दैलेख र कालीकोटका ३/३ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग प्रमुख डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले जानकारी दिए ।
सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका वडा नं. १, ३,४, ५, ६ र ७ का २५ जना पुरुष र एकजना महिला रहेका छन् भने कुमाख गाउँपालिका-३ का २ जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएकोको छ ।
यस्तै, सुर्खेतको बराहाताल गाउँपालिका वडानम्बर १ र २ का दुई पुरुष, भेरीगंगा नगरपालिका वडानम्बर २ का दुईजना पुरुष, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-२ का दुईजना पुरुष, चौकुने गाउँपालिका वडानम्बर ७ र ८ का दुईजना पुरुष, लेकबेसी नगरपालिका वडानम्बर १, ३, ४ र ९ का ६ जना पुरुष, पञ्चपुरी नगरपालिका वडानम्बर ३ र ९ का पाँचजना पुरुष र एकजना तीन वर्षीया बालिका रहेका छन् ।
दैलेख र कालीकोटमा पनि ३/३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै कणर्ाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या ६ सय ४१ पुगेको छ ।योसँगै कर्णालीमा संक्रमितको संख्या ६४१ पुगेको छ । जसमध्ये ७ जना डिस्चार्ज भएका छन् भने ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।